MOQ: ≥10000 / အပိုင်းအစ
စျေးနှုန်း: $ 0.015- $ 0.05 / Piece
မူလတည်နေရာ :: Zhejiang, တရုတ်
ကုန်အမှတ်တံဆိပ် :: oem
ပိုးသတ်ဆေးအမျိုးအစား :: ultrasonic
အရွယ်အစား :: 17.5x9.5cm
အမျိုးအစား :: ဆေးဘက်ဆိုင်ရာမျက်နှာဖုံး
ကုန်ပစ္စည်း :: ဟုတ်တယ်
သက်တမ်း :: နှစ်
အရည်အသွေးအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် :: ce
အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးစံ :: EN14683
ထုတ်လုပ်မှုသတ်မှတ်ချက်များ: 17.5x9.5cm ပြားချပ်ချပ်အမျိုးအစား
ပစ္စည်း： ၂ x25 ဂရက်မဟုတ်သောအထည် + ၁x ၂၅ ဂအရည် - လွထည်
အရောင်: အပြာရောင်, အနက်ရောင်, ဒီဇိုင်း
ထုပ်ပိုး： စက္ကူ - ပလပ်စတစ်အထုပ်နှုန်း 20pcs
အရေအတွက်: အမှုနှုန်း 4000pcs
စုစုပေါင်းအလေးချိန်: ၁၅ ကီလိုဂရမ်
၁။ ဤအရာသည်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကာကွယ်ရေးအတွက်အသုံးပြုရန်အတွက်မျက်နှာဖုံးမျက်နှာဖုံးဖြစ်သည်။ ၆.၉ လက်မ X3.7 လက်မ
နားကြပ်များနှင့်တစ်ကြိမ်တည်းသုံးနိုင်သောအကာအကွယ်မျက်နှာဖုံးမျက်နှာဖုံးများ၊ ဤမျက်နှာဖုံးများနှင့်အရည်အသွေးသည်သေချာသည်။ ဤမျက်နှာဖုံးများသည်လိုက်နာရန်လိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသည်။ မြို့ကြီးများမှလူတစ် ဦး ချင်းစီအနေဖြင့်မျက်နှာဖုံးစွပ်ရန်တောင်းဆိုသည်။
3.Disposable Environmental Mask: တစ်ခါသုံးတစ်ခါသုံးမျက်နှာဖုံးများသည်အိမ်များ၊ ရုံးများနှင့်အခြားပုဂ္ဂလိကနေရာများအတွက်သာမကကျောင်းများ၊ ရုံးခန်းများ၊ အပြင်ဘက်နှင့်အခြားအများသုံးနေရာများအတွက်သင့်တော်သည်။
4. ၀ န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာအာမခံချက် - သင့်တွင်မေးခွန်းများရှိပါကကျွန်ုပ်တို့အားအခမဲ့ဆက်သွယ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏အကောင်းဆုံးစျေးဝယ်ခြင်းအတွေ့အကြုံကိုသေချာစေရန်သင်၏ပြproblemနာကိုဖြေရှင်းရန်အကောင်းဆုံးကြိုးစားပါလိမ့်မည်။
5. လွယ်ကူစွာအသုံးပြုပါ - ကျွန်ုပ်တို့၏အကာအကွယ်အဖုံးများသည်တစ်ခါတည်းနှင့်တစ်ကြိမ်တည်းဖြစ်သည်။ ပေါ့ပါးသောအလုပ်သည်သင်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေစဉ်၊ ကုန်စုံဆိုင်သို့သွားစဉ်သို့မဟုတ်လိုအပ်သောအမှုကိုလုပ်ဆောင်နေစဉ်အသက်ရှူလွယ်ကူစေသည်။
ရှေ့သို့ ပါးစပ်နှာခေါင်း Swab စုပုံ
နောက်တစ်ခု: တစ်ခါသုံးဆေးဘက်ဆိုင်ရာအသုံးပြုမှု Vaginal Dilator Set
ရှေ့သို့ 100% လဲမှို့ Swab
အသက်ရှူ Trainer လေ့ကျင့်ခန်း